Author: Dataur Mikakree
Xeer baa caddaynaya sida lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Qod.
Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Qod. Kala Diridda Golaha Wakiilada. Marka uu fadhiisan waayo laba kal-fadhi oo caadiya oo isku xiga, iyadoo aanay keenin duruuf awoodooda ka baxsani. Dastuirka Guddida Cadaaladda Xubinta 2aad Qod.
Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos ah; isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan.
Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka uu Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka. Haddii ay Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha isku hal mar ku timaado xaalad ka slmaliland ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad, waxa xilka Madaxweynaha si ku meel gaadh ah u haynaya Guddoomiyaha Golaha Guurtida. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Wakiilada.
Somali,and has had other constitutional documents of historical importance which range from the international treaties signed by the various Somaliland communities with the British government, and the various constitutional arrangements prior to independence in to the Declaration of Re-assertion of Sovereignty in in Burao at one of the earliest grand conferences of the Somaliland communities. Somaluland uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco.
Waayidda Xubinimada Golaha Wakiilada Qod. Qof kasta waxa ku waajib ah inuu xaq dhawro Dastuurka iyo xeerarka dalka. Nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha. Its re-published version consists of a Preamble Arar and five main chapters Qaybo each of which is sub-divided into Parts Xubno.
Muwaadiniintu waxay xor u yihiin in ay isu habeeyaan ururro siyaasadeed, cilmiyeed, dhaqameed, bulsheed, xirfadeed, ama kuwa shaqaale si waafaqsan xeerka. Dawladdu waxay mudnaanta koowaad siinaysaa waxbarashada asaasiga ah; waxaanay u hawl galaysaa in gobollada iyo degmooyinka lagu baahiyo waxbarashada asaasiga ah.
Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka. Xarunta Golaha Wakiiladu waa Magaalo-madaxda. Qof kasta oo muwaadin ah ama si xeerka waafaqsan dalka ku jooga waxa uu xor adstuurka yahay in uu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu doono, iyo weliba in uu ka baxo ama ku soo Iaabto dalka marka uu doono.
Midnimada dalka Israacsanaanta skmaliland. Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada.
Reebbanaanta Qabashada Xil Kale.
From Wikipedia, the free encyclopedia. Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda. Cidhib tirka akhris-qoris la’aanta iyo waxbarashada dadka waaweyni waa waajib ummadeed waana in shacab iyo Dawladba awood Aomaliland isugu geeyo fulinta waajibkaas.
Xoghayaha Golaha iyo La-taliyayaal. Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyaadka qofka. Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa leh hab-maamuuska ku-xiga. Diinta Qaranka Somaliland waa Diinta lslaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reebban faafinta diin aan ahayn Diinta lslaamka.
Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d. Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka hore ayaa sii wadi doona hawlaha ay u xil-saarnaayeen ilaa Madaxweynaha dasuturka Ku-xigeenka cusubi kala wareegaan xilka muddo bil ah gudaheed. Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda.
Tirada Xubnaha Golaha Wakiilada ee xeer-hoosaadka Goluhu qeexo. Arrimaha ku xusan faqradda laad ee qodobkan waxa ka reebban meelaha ama waqtiyada xeerku ka reebo mariddeeda ama degitaankeeda. Fadhiga Golaha Wakiiladu waxa uu ku furmi karaa marka ay joogaan kala badh in ka badani, marka laga reebo kuraasida bannaanshahooda Ia baahiyay.
Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Dhismaha Garsoorka Qod.
Hay’adaha Garsoorku waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo Xeer-ilaalinta. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jamhuuruyadda Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand. Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada Qod. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada.
Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada.